Ukuze wakhe indlu yekhrekhri ekhonze ngezandla zabo, udinga ukwazi okuningi kwama-nuances. Abakhiqizi bamabhuloki abayeki ukukhuluma ngokulula komsebenzi wokwakha lapho usebenzisa imikhiqizo enjalo. Inzuzo eyinhloko ukuthi akudingeki ukhokhele umsebenzi weqembu lokwakha noma inkampani. Izindleko zendlu entsha zizoncishiswa kuphela kumanani wezinto ngokwazo kanye nokulethwa. Ngakho-ke, ngemva kwesikhathi esithile kusayithi kungase kubonakale indlu engabizi kakhulu noma ibhuku lokugeza. Kokukhonkolo okwenziwe kahle , ngezandla zabo siqu ukwakha izakhiwo ezifanayo kuqinisile. Nokho, okokuqala kuzodingeka ulungiselele iphrojekthi, futhi wenze umsebenzi we- geodetic. Iphuzu elibalulekile ekwakheni ukusetshenziswa kweglue ekhethekile kanye nokuba khona kwetheyibheli elithile.
Uma kuhlelwe ukwakha indlu kusuka khonkthi esebenziwe ngezandla zakho, kuqala kokukhethwa kukho kokubulawa kukhethwe, ngoba empeleni imidwebo inganikwa noma yimuphi umumo nokuthungwa. Kufaneleka ukunaka izigcawu zazo zonke izinhlobo zezakhiwo ezivela kulolu lwazi. Noma kunjalo, isithombe esikhangayo asikwazi ukudlulisa yonke imisebenzi yendawo yokuhlala yanamuhla, ngakho-ke umuntu noma iphrojekthi ejwayelekile kuyodingeka. Nakuba amabhlokhi anjalo alula kakhulu, asenayo isisindo. Ngakho-ke, ekwakhiweni kwendlu enezimbalwa eziningana, ukubalwa okuphelele kwezakhiwo ezisekelayo kuyadingeka.
Ngokuvamile umthuthukisi ngamunye owakha indlu yakhe ngezandla zakhe ezenziwe ngekhonkri esebenzayo, ukholelwa ukuthi kuyinto edingekile ukudala isisekelo sokubheka okungabizi. Isisekelo esinjalo sinamandla wokwakha owodwa noma amabili wokwakha amamaki, kodwa kulokhu ukukhwabanisa nokukhwabanisa izinto kufanele kube lula ngokwanele. Ngaphezu kwalokho, cishe izinkomba zenhlabathi eziphelele ziyadingeka. Isisekelo esivumelanayo sifanelekile emazweni angenawo amaqhwa angenalutho nesakhiwo esiqinile.
Umnikazi wesayithi, othe wanquma ukwakha indlu kakhonkrithi okhishiwe, noma kunjalo ufuna ukugcina imali. Ngokuvamile inqubo yokwakhiwa iyanqamuka isikhathi esingenamkhawulo. Ukuze wenze izikhathi ezincane kakhulu, kubalulekile ukuthi ubeke imali ngokufanele futhi ubeke phambili lapho uthenga izinto zokwakha. Isibonelo, ngaphambi kokusekelwa kwesisekelo akukho sidingo sokuthenga izinto zendonga, ngoba ingashubaza ngalesi sikhathi. Akunconywa ngisho nokuletha ukhonkolo okhishiwe ngokuphelele, ngoba kungenzeka ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kuzoshintsha izindawo zayo ngesikhathi sokugcina isikhathi eside.
Ngokuqinisekile, indlu eyenziwe ngekhonkrithi ephazamisekile igcwaliswe ngesikhathi esifushane, kodwa kubalulekile ukuhlola isimo ngokuqondile. Ngokusemthethweni, izindonga zesitezi sokuqala zakhiwa ngezinsuku ezingu-7-10 yiqembu eliqukethe abantu abane, ngobubanzi bombukiso obuyi-400 mm. Lona umthetho omuhle, kodwa empeleni awukwazi ukwenza njalo ngisho nabachwepheshe. Eqinisweni, ngokwakhiwa komuntu ngamunye, ngaphandle kokwazi namakhono, isikhathi sizokhula kakhulu, futhi isivinini sokwenyuka kwama-altitude siyokhula.